Xhumana Nathi | WoopShop
Uma udinga noma yiluphi ulwazi mayelana nokuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswa noma okwenziwa ngemuva kokuthengiswa okufana nemiyalo yakho yakamuva, inqubo yokuthenga, izindlela zokukhokha, izinketho zokulethwa noma inqubo yokuphikisana, sicela uxhumane ne-Woopshop.com ngengxoxo ebukhoma noma nge-E-mail support@woopshop.com futhi Inkonzo yethu Yamakhasimende izophendula ngokuvamile ngaphakathi kwamahora we-24.
IWoopShop.com iyiwebhusayithi yokuthengisa jikelele kanye nomhlinzeki. Yonke imikhiqizo ekuWoopShop ikhwalithi ephezulu futhi ingathengiswa ngentengo ephelele. Ukuthenga imikhiqizo yefeshini e-inthanethi ephelele emakethe yase-wholesale yase-China akukaze kube lula kangako. Ukusiza abathengisi abakwi-inthanethi kanye nabathengisi abathengisayo abathe xaxa ukukhulisa ukuthengisa nokukhulisa amabhizinisi abo, sixhuma amakhasimende ethu nabakhiqizi abaphezulu. Futhi kulula futhi akunangozi ukuthi uqale ibhizinisi lakho ngosizo lweWoopShop wholesale bese ulahla insizakalo yokuthumela. Izinqolobane zethu eziseYurophu, e-US naseCanada, e-Australia naseChina unazo.
Ngokuthola okuthe xaxa nokuyekisa umsebenzi wokuthumela, sicela uxhumane info@woopshop.com
Amakhasimende asilinganisela nge-4.9 / 5 ngokususelwa kuzibuyekezo ze-148733.